VONO OLONA TAO ANTSIRANANA : Mpivady teratany karana, novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Nitrangana famonoana olona feno habibiana taty Antsiranana ny alin’ny alahady hifoha alatsinainy 4 jona teo. Tsy voafaritra mazava ny ora nitrangan’ny loza. 5 juin 2018
Teratany karana, mpivady monina ao amin’ny Place Kabary no maty nisy namono. Nokapaina ny tendan’izy ireo, avy eo natao nifampitaingina. Teo amin’ny lalantsara tao an-tranon’izy ireo no napetraka ny vata mangatsiakan’izy mivady. Ny olona teo amin’ny manodidina nahita ny fiaran’ireto farany mbola mangotroka teo ivelany nanomboka tamin’ny alina hatramin’ny 4 ora maraina no niantso ny sefo fokontany ary ity farany no niantso mpitandro filaminana nizaha ny zava-nitranga.
Araka ny fantatra dia tsy hita popoka izay nanjavonan’ny mpiambina ny tanànan’izy mivady ireo hatramin’izao. Mbola tratran’ireo polisy teo an-toerana ny marito izay heverina ho fitaovana nampiasain’ireo mpanao ratsy namonoana ireto mpivady ireto. Samy nodidiana tamin’ny zavatra maranitra ny tendan’izy mivady. Efa misokatra ny fanadihadihana mahakasika ity famonoana olona feno habibiana ity. Teratany karana manana ny tranombarotra Mora Pièces izy mivady ireo. Mivarotra kojakojana fiara no ahafantaran’ny maro azy ireo aty Antsiranana.
Lasibatry ny asan-jiolahy ny teratany karana raha ny tranga nisesy nanomboka ny zoma 1 jona teo no asian-teny. Araka ny vaovao voaray dia nisy nanafika ihany koa ny tovolahy karana iray taty an-toerana raha izy hivoaka ny tranony tamin’ny maraimbe, handeha hamonjy moske. Mitaintaina araka izany ireo teratany karana aty Antsiranana manoloana ny tranga niseho ireo.
Ny fahatrarana izay nahavanon-doza no fanirian’ny maro. Tsiahivina fa tsy vao sambany no ahitana voatafika tahaka izao aty an-toerana, ka ilaina araka izany ny hikarohana lalina ireo izay nahavita fihetsika feno habibiana tahaka izao. Efa misokatra araka izany ny fanadihadiana sy fikarohana ny nahavanon-doza ka ho fantatra mian-dalana eo izay mety ho tohiny.